Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 123
Jabhadda Al-Nusra oo toogasho ku dishay inkabadan 10 Askari oo katirsan Ciidamada Nusayriyada.
Mujaahidiinta Jabhadda Al-Nusra oo ah faraca Alqaacida ee dalka Suuriya ayaa toogtay maxaabiis ku jiray gacanta Mujaahidiinta kuwaas oo dhawaan lagu soo qabtay Weerar ka dhacay gobolka Al-Qalamuun ee saaran dhulka Lubnaan. Jabhadda ayaa xilli hore oo maalintii shalay ah waxay labo saacadood oo qur ah u qabteen in lagu joojiyo Iqtixaam ay ciidamada Nusayriyada ku galayeen deegaan lagu magacaabo ...	Read More »
Diyaaradaha Taxaalufka oo gumaad ba’an ka geystay magaalada Minbij ee dalka Suuriya.
Dowladaha Maraykanka iyo kuwa Reer galbeedka ayaa duqeymo arxan darro ah waxay ka wadaan magaalada Minbij iyo deegaanada hoos yimaada, kuwaas oo ay ku doonayaan in magaalada ay ku baaba’iyaan islamarkaana kaga barakaciyaan dadka muslimiinta ah ee degan. Magaaladan oo muda kabadan hal bilood lagu soo rogay go’doon adag oo afarta jiho ah islamarkaana ay ku hareereysanyihiin maleeshiyaad kurdiyiin ah ...	Read More »
Ciidamo Faransiis ah oo ku geeriyooday diyaarad lagu soo riday dalka Liibiya.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dowladda Faransiiska ayaa ka qayb qaadanaya dagaallada ka socoda dalka Liibiya ee reer galbeedku kula jiraan dadka Muslimiinta ee wadankaas ku dhaqan, balse dowladda Faransiiska iyo warbaahintooda arimahaas kama hadlaan mana ogola in la ogaado. Ciidamada Faransiiska ayaa la howlgala islamarkaana ka barbar dagaalamaya maleeshiyaadka dagaal Ooge khaliifa Xaftar, waxaana sida ay baahinayaan ...	Read More »
Diyaarad dagaal oo lagu soo riday dalka Liibiya.
Wararka ka imaanaya dalka Liibiya ayaa sheegaya in diyaarad dagaal oo ay leeyihiin maleeshiyaadka Khaliifa Xaftar lagu soo riday deegaan lagu magacaabo Al-Maqruun oo u dhow magaalada Ajdaabiya ee dalkaas. Diyaaradda lasoo riday ayaa waxaa saarnaa Afar ruux oo duuliyaasheeda ahaa, waxaana guud ahaan dhintay 4 Askari, iyadoona burburka Diyaaradda lagu soo bandhigay baraha Internetka. Guutooyinka difaaca magaalada Banqaazi ayaa ...	Read More »
Hogaanka Al-Qaacida oo war kasoo saaray Gabdho Maxaabiis ah oo kujira gacanta dowladda Pakistaan.( Akhriso).
Bayaan lagu baahiyay baraha Internetka islaamrkaana kasoo baxay hogaanka Mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa waxaa lagu iclaamiyay Gabdho Maxaabiis Mujaahidiin ah oo ay afduubteen ciidamada dowladda Paakistaan oo xamlo dagaaleed ka dhan ah diinta Islaamka ku qaaday gobolka Waziiristaan muda kabadan hal sano iyo Bar. Mujaahidiinta ayaa sheegay in ciidamada dowladda Pakistaan oo awaamiir ka helaya dowladda Maraykanka ay xabsiga dhigeen Gabdhahan ...	Read More »
Kooxihii Afgembiga Turkiga waxay rabeen iney dilaan ama soo qabtaan Ordogan.!
Markii ugu horreysay tan iyo markii uu fashilmay isku daygii lagu doonayay in lagu Afgembiyo Xukuumadda Turkiga ayaa waxaa la helay Farriimihii ay is dhaafsadeen hogaamiyaasha hor kacayay Afgembiga fashilmay ee dalka Turkiga. Farriimahan oo ay Saraakiisha Afgembigu isku dhaafsadeen Aaladda Whatsupp-ka ayaa muujinaya sida ay Saraakiishu isugu gudbinayeen Awaamiirta, waxaana qorshahoodu uu ahaa in xaalad deg deg ah la ...	Read More »
Banaan baxyo waweyn oo wali ka socoda dalka Turkiga.
Dadka Turkida ah ayaa wali dhigaya banaan baxyo xoogan kuwaas oo ay ku muujinayaan sida ay u taageersanyihiin Xukuumadda uu hogaamiyo Rajab Dhayib Ordogan oo ka badbaaday isku day lagu doonayay in guud ahanba lagu rido islamarkaana lagu dilo Ordogan. Banaan baxyda oo ah kuwa aad u ballaaran ayaa ka dhacaya magaalooyinka Ankara, Istanbuul iyo kuwa kale, waxaana dadka dhigayay ...	Read More »
Dowladda Turkiga oo ka badbaaaday isku day lagu doonayay in lagu Afgembiyo.
Gelinkii dambe ee maalintii shalay oo Jimco ah ayaa Saraakiil katirsan qaybaha kala duwan ee Xukuumadda Turkiga oo ciidamadu ku jiraan waxay isku dayeen iney afgembiyaan xukuumadda uu hogaamiyo Rajab Tayib Ordogan, iyagona la wareegay kooxaha Afgembiga tvga ku hadla Afka Xukuumadda waxaana ay ku amreen iney baahiyaan in Xukuumadda la riday. Saraakiisha hogaamineysa Inqilaabka oo haatan lagu dhigay gacanta ...	Read More »
Weerar kii ugu dhiig daadashada badnaa dhanka Faransiiska dhowr bilood gudahood ayaa gelinkii dambe ee maalintii shalay waxa uu ka dhacay magaalada Niis ee dhacda koonfurta dalka Faransiiska. Qof darawal ah islamarkaana kaxeynayay Gawaarida nooca xamuulka qaada ah ayaa jeeray goob lagu dalxiiso oo dad farabadan ay ku sugnaayeen, waxaana uu halkaas ku dilay tobanaan ruux oo Faransiis ah. Xilliga ...	Read More »
Maraykanka oo ciidamo ilaaliya Safaaradooda Jubba u diray Koonfurta Suudaan.
Iyadoo dhawaanahan maleeshiyaadka ku dhaqan Koonfurta Suudaan ay kala qabysameen islamarkaana magaalada Jubba ay marti gelisay dagaallo xoogan ayaa dowladda Maraykanka waxay ciidamo dheeraad ah u dirtay dalkaas kuwaas oo la sheegay iney ilaalin doonaan amaanka safaradda Maraykanka ee dalkaas. Obama madaxweynaha Maraykanka ayaa ku war geliyay Congereska in ciidamo gaaraya 47 Askari oo dheeraad ah uu u diray koonfurta ...	Read More »